Iko musika kugona kweQingdao carbomer yakakura. Izvo zvinoonekwa kuti mumakore mashanu anotevera, kuchave nemamiriyoni gumi nemazana matatu emakumi mana emusika yuan ichagadziriswa muna 2025. Tevere, ngatitevere zvinhu zvitsva zveQingdao yinuoxin
Carbomer ndeye homopolymer yeacrylic acrylic, kuyambuka kana kubatana nechero ipi yakati wandei polyols allyl ethers. Ichi chinoumba chinowanzo chena hupfu, chinoshandiswa seyakaomesa mumiriri uye emulsion stabilizer. Iyo inozivikanwa nekushandisa kwayo muindasitiri yezvizoro uye ine chishandiso chinoshanda mune zvekurapa nehutano minda. Masangano mazhinji anotenda kuti mhando dzese dzemakemikari ane hutano hwakanaka, kunyange hazvo zvimwe zvezvinhu zvinoshandiswa kugadzirisa pH yavo zvingave zvinonetsa.
Mumakore mashoma apfuura, musika wepasi rose we carbom wakura nekukurumidza, iine avhareji yegore yekukura mwero we 11.98. Kapom yemari yepasi rose inoda kusvika 736 mamirioni emadhora eUS, uye chaiko kutengesa vhoriyamu ingangoita mazana mashanu nemakumi mashanu nematanhatu matani
Kurongwa kwecarbomer kunosanganisira carbomer 940, carbom 980, kapom 934, nezvimwewo, uye chikamu checarbomer 940 muna 2018 chiri 37.
Carbomer inoshandiswa zvakanyanya mukugadzira mishonga, kutarisirwa kwega uye zvekuzora. Carbomer inoshandiswa mukuchengetedza kwega uye zvipodaidzo, ingangoita 54%.
Iyo Asia Pacific dunhu inyika yevatengi ine mugove wemusika unosvika makumi mashanu nemashanu. Uye zvakare, North America neEurope vane zviyero zvakafanana, kuverenga 14.3 uye 17.8 zvichiteerana nemusika wevatengi
Iko kugona kwekuvandudza musika kwakanaka. Wakatora here mukana wemusika wecarbom? Qingdao kapom main vagadziri vanokugamuchira iwe kuti ushanyire kambani yedu nekukurukura pamwe zvinhu.